Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » Beginners များအတွက် 10 ကြံ့ခိုင်ရေးသိကောင်းစရာများ
တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုစတင်စဉ်းစားနေပါသလား ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဦးအားကစားရုံသွား? ဤအ 10 ကြံ့ခိုင်ရေးအကြံပေးချက်များသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သုံးပါ။
1 ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း Worth Make
သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုထဲကအများစုကိုရရှိရန်ရည်ရွယ်လျှင်သင်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေရသောရလဒ်များ 80 န်းကျင်% အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများဖွင့် 20% ကနေလာဆိုတာကိုသတိရဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒီတစ်နာရီရဲ့ session တစ်ခုထဲမှာ, ယလေ့ကျင့်ခန်းများသာ 12 မိနစ်သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအများစုမှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သငျသညျသူတို့အားမိနစ်တကယ်ရေတွက်စေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်သင်၏အချိန်အခွင့်ကောင်းယူမယ့်အချိန်ကပဲတဦးတည်းကြွက်သားအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမိုအလုပ်လုပ်သောဒြပ်ပေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုအသုံးပြုပါ။
2 ။ အမြဲတမ်းကျန်းမာစားရန်ကိုသတိရပါ
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပုံဖော်မဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုသာကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သင်အားကစားခန်းမမှဦးတည်နေလျှင်သင်အိမ်ပြန်နှင့်ပြင်သစ် fries ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ 2-လူတစ်ဦးနှင့်အတူနှစ်ဆ cheeseburger ကိုစားနိုင်အောင်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မဆိုမျက်နှာသာမလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကုန်စုံစျေးဝယ်, ဝယ်ယူသွားရသည့်အခါ ကျန်းမာမုန် အစားရှိတဲ့ Junk အစားအစာ၏။
သင်ပိုပြီးကယ်လိုရီကိုချွတ်လည်းမီးလောင်နေလျှင်, သင်တစ်နေ့တာ၏ကျန်အတွက်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ရှိသည်သေချာစေရန်နည်းနည်းပိုကိုစားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်သင်သည်ဖြည့်ညှင်းအတွက်စားသောကမြင်လျက်အပြစ်ကိုခံသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစာအာဟာရဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်ဖက်တီးအစားအစာရှောင်ပါ။
3 ။ သင့်စားအကျင့်ကိုပြောင်း
သင်မှန်မှန်ကန်ကန်စားသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ကျန်းမာစားသောသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။ စနစ်တကျအစာစားခြင်းထိုနေ့၏မှန်ကန်သောအချိန်များတွင်အစာစားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ နံနက်စာပျောက်ဆုံးနေတစ်ကယ့်ကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောစိတ်ကူးသည်နှင့်သင်ဖြစ်စေညမှာသိပ်နောက်ကျမစားသင့်တယ်။ ညဥ့်နက်စာစားခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပျင်းနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်မလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီစားသုံးစေပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်အောင်သင်ကအကျိုးရှိမည်ဟုအဘယျသို့အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအားဆင့်ဆိုရမည်။
4 ။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်စီစဉ်
သငျသညျအခြို့သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အခါသင်လေ့ကျင့်ခံရဖို့သွားနေမယ့်အခါ, သိကြများနှင့်ကြောင်းသေချာစေရန်, သင်အမှန်တကယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးသင့်ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာရက်ပေါင်းပါဝင်သည်နှငျ့သငျတိုဘယ်လောက်အခမဲ့အချိန်အကြောင်းကိုပညာရှိဖြစ်သတိရပါ။
သင်အားကစားခန်းမခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်၏အလေ့အကျင့်သို့မရကြဘူးဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနှင့်အတူနေဖို့သတိရပါ။ အရမ်းမကြာခဏအားကစားရုံခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်မကောင်းတဲ့အလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းပျောက်ဆုံးများ၏အလေ့အထအရဆိုပါကသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် achievable နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
5 ။ ကြံ့ခိုင်ရေးမှတစ်ဦးက 100% ကတိသစ္စာ Make
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းသင့်ထံမှပြည့်စုံဆည်းကပ်လိုသတိရရန်ရှိသည်။ သငျသညျတစျနေ့ချွတ်ထိုက်သော်လည်းသကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်, ရံဖန်ရံခါတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခု skip လို့မရပါဘူး။ သင့်ရဲ့အနားယူရာနေ့ဖြစ်နှင့်ကပ်ကြလိမ့်မည်သည့်အခါကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ သငျသညျစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်ရှိသည်ရင်တောင်, ဒေသခံအားကစားရုံသို့သွားရောက်နှင့်ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့နေ့တိုင်းကနေတစ်နာရီယူသေချာပါစေ။ အရမ်းကျန်းမာစားနှင့်အတူတန်းတူနေပါ။
6 ။ စေတယ်ဟာ Off ကိုသင်ထားပါစို့မနေပါနဲ့
အဖြစ်မှန်ကနဲ့တူအမြောက်အများမှအမြိုးသမီးမြားအဘို့အလုနီးပါးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်၏ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစီအစဉ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းဆရာကိုသင်အားပေးတော်မူပြီသော program တစ်ခုကပ်လျှင်သင်မှားပါသွားပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
7 ။ အခြေခံကပ်
သင်သာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတူစတင်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်သင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူဆက်လက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ချပြီးရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, သင်သေချာသငျသညျအခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြှမျးဝငျစေသင့်ပါတယ်။
8 ။ သင့်ရဲ့နယူးပုံမှန်များအတွက်ပြင်ဆင်ပါ
သငျသညျယလေ့ကျင့်ခန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရရှိနိုင်ပါစေနှငျ့သငျသှားဖို့သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်တစ်ကြမ်းတမ်းအစီအစဉ်ရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင် 6-pack ကိုဝမ်းဗိုက်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဒါ, လွန်းအချို့လက်တွေ့ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူတက်လာသငျသညျ6ပေါင်ဆုံးရှုံးဖို့ချင်ပါတယ်လျှင် 20 လအတွင်းအချို့ကြွက်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သို့မဟုတျ, သေချာသင်သည်ကိုယ်အဘို့သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုလုပ်ရပါမည် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိကြပါလျှင်အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာသင်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။
9 ။ Cardio လုပ်ဖို့ကိုသတိရပါ
သငျသညျ 6-pack ကိုဝမ်းဗိုက်, ကြီးမား biceps နှင့်အစွမ်းထက်ခြေထောက်ရှိသည်ဖို့လိုသလား? သင်ရုံအလေးရုတ်သိမ်းရေးအားဖြင့်သူတို့အားအမှုအရာမရနိုင်ပါ။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ cardio လုပ်ဖို့သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးကနျြးမာရေးကလပ်မှာမရရှိနိုင်ပါစက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အများစုမှာ gyms treadmill, elliptic, လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးနှင့်လှေလှော်စက်များရှိသည်။
သင်မကြာခဏ cardio ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်အဆီချွတ်မီးရှို့နောက်ဆုံးမှာသင့်ရဲ့ကြွက်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြသရန်စတင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
10 ။ အဆိုပါအားကစားရုံမှာခြိမ်းခြောက်ခံရမနေပါနဲ့
သင်ကအားကစားခန်းမမှာလူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်, လူတိုင်းမတစ်ဦး 20 နှစ်အရွယ်ကာယဗလမယ်ကြောင်းကိုသတိရဖို့လိုပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်လူတိုင်း၏အချို့သောအမျိုးအစားတစ်နေရာရာကိုစတင်ရန်ရှိပါတယ်အောင်မြင်ရန်လည်းမရှိ။
ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များအာရုံစိုက်နှင့်သင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးအခြားလူများနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သငျသညျ, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှကြောက်လန့်နေသို့မဟုတ်အခြားလူများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလူတန်းစားပြုလျှင်။
အခြားမည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပေးချက်များရှိပါသလား? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Comment
မတ်လ 10, 2016 FitnessRebates သတင္းေၾကျငာခ်က္ မှတ်ချက်မရှိ